China Nano manadio tena vita amin'ny plastika vita amin'ny alimina vita amin'ny plastika sy mpamatsy | Jixiang
Ny ambonin'ny fonosana plastika plastika nano fluorocarbon aluminium dia manana asa fanadiovana tena tsara. Amin'ny ankapobeny, ny tontolon'ny rindrina vita amin'ny plastika vita amin'ny alimika dia ho voaloto noho ny vovoka sy ny orana aorian'ny fampiasana azy mandritra ny fotoana maharitra, indrindra ny silika fitomboka amin'ny fiantohana kalitao tsy dia hentitra ampiasaina amin'ny tetikasa sasany, aorian'ny fandrobohana rano be dia be, maro be ny tasy mainty mivoaka avy amin'ny tonon-taolana, izay tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fotoana fanadiovana, fa misy fiatraikany lehibe amin'ny fisehoan'ny rindrina. Noho ny fihenjanana ambany amin'ny firakotra, dia sarotra ny manaraka azy. Malalaka kely ny ala azo esorina rehefa avy nosasan'ny ranonorana, izay mety hahatratra ny vokatry ny fanadiovan-tena. Izy io dia afaka mamonjy be ny vidin'ny fanadiovana sy fikolokoloana ho an'ny tompona.
1. Tombony azo amin'ny fitsitsiana rano: mamonjy loharanon-drano betsaka ny fanadiovana ny rindrina;
2. Tombontsoa lehibe amin'ny fitsitsiana herinaratra: ny TiO2 an'ny OKer nano manadio tena miaro ny tontolo iainana sy ny taratra taratra ultraviolet dia tsy mampihena ny fahalotoan'ny hazavana ihany, fa manakana ny 15% amin'ny angovo avy amin'ny masoandro tsy hiditra ao amin'ny efitrano, ary mampihena ny fanjifana herinaratra, manao azy milay sy mahazo aina.
3. Fanadiovan-drivotra: 10000 metatra toradroa ny firakotra fanadiovan-tena dia mitovy amin'ny vokatry ny fanadiovan-drivotra ataon'ny hazo poplar 200. Ny Nano-TiO2 dia tsy vitan'ny fanimbana ny loto maloto, fa koa manana hery miteraka bakteria sy bakteria, izay afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fanadiovana ny rivotra isam-paritra ary manatsara ny kalitaon'ny tontolo iainana.
4. Atsaharo ny fahanterana sy ny fanjavonan'ny substrate miloko: OKer nano-TiO2 manadio tena dia manakana ny fihetsika mivantana ataon'ny taratra ultraviolet amin'ny substrate, mampiadana ny fahaverezan'ny loko miloko toy ny rindrina lamba sy takelaka amin'ny tara-pahazavana, ary dia tsy mora antitra nandritra ny fotoana ela, mba hahatratrarana ny vokatry ny manjelanjelatra sy ny fiainana.
Ampiasaina indrindra amin'ny rindrina ambain'ireo trano avo lenta, hotely kintana, ivon-toeran'ny fampirantiana, seranam-piaramanidina, tobin-tsolika ary toerana hafa misy fepetra takiana amin'ny fahalotoan'ny rivotra.
Previous: Takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny alimo
Manaraka: Takelaka plastika aluminium florocarbon miloko